Donald Trump Oo Bilaabay Fulinta Balanqaadyadiisii – Goobjoog News
Donald Trump Oo Bilaabay Fulinta Balanqaadyadiisii
Madaxweynaha dalka Maraykanka Donald Trump ayaa saxiixay wareegto lagu fulinayo dhisamaha derbiga ku teedsan xuduudka uu Maraykanka uu Koonfurta kula wadaago wadanka Mexico, kaas oo uu horay u balanqaaday inuu dhisayo xilligii uu olalaha doorashada uu ku jiray, Trump ayaa waxa uu xusay in hawsha lagu dhisayo darbiga ay bilaaban doonto bisha soo socta.
Darbiga laga dhisayo xaduudka kala qeybiya Maraykanka iyo Mexico ayaa waxa uu dhirirsanyahy maasaafo dhan 2000 Mayl waana mid kamida balan qaadyadii Asaasiga ahaa inta uu ku jiray olalihiisa doorashada.
Madaxweyne Trump ayaa horay waxa uu u sheegay lacagta ku baxaysa dhisidda darbiga taas oo gaaraysa ku dhawaad 8 bilyan, waxaana lagu wadaa in Trump uu la kulmo madaxweynaha dalka Mexico dhammaadka bisha soo socoto .
Madaxweynaha dalka Mexico iyo mas’uuliyiinta dalkaasi ayaa horay waxa ay u sheegeen in aysan aqbalayn in darbi laga dhiso xuduudda waddankooda si walba oo ay xaaladda ay noqoto .
Sidoo kale Donald Trump waxa uu soo saaray amar lagu masaafurinayo dadka soo galootiga ah kuwaas oo aan wax sharci ah haysan.
Trump ayaa todobaadkaan waxa uu shaaciyay in ku dhawaad 3-milyan ilaa 5 milyan oo muhaajiriin ah ay u codeeyeen Hillary Clinton intii lagu guda jiray doorashada balse wax cadayn ah uma keenin.
Booliiska Oo Ka Warbixiyey Howlgallo Ay Ka Wadaan Jubbaland
Shacabka Hiiraan Oo Ka Aragti Dhiibtey Doorashadii Guddoonka Golaha Shacabka
Madaxweyne Farmaajo oo Ku Baaqay in Wadajir Loogu Gurmado Dadka Ku Dhibaataysan Afgooye
Dpbkye acfger Cialis cheap price cialis no prescription
Jawaari oo Xafiiskiisa Ku Qaabilay Safiirka Sweden iyo Ergeyga Xoghayaha Guud ee QM u Qaabilsan Soomaaliya Danjire Niclos Key
Wildz Online Casino https://wildz-casino.net/ welcome deposi...
compare and contrast essay writing psychology essay writing...
homework now essay description help write a essay...
essay online buy mfa creative writing help writing an essay...
essays paper in a persuasive essay can you use i the thesis...